Jesús Sánchez Adalid. Kubvunzana nemunyori we Zvombo zvechiedza | Zvazvino Zvinyorwa
Jesús Sánchez Adalid. Kubvunzana nemunyori weZvombo zveChiedza
Mufananidzo waJesús Sánchez Adalid: (c) Antonio Amores. Kutendeseka kweIngenio de Comunicaciones.
Jesu Sánchez Akashata ine nyowani nyowani, Zvombo zvechiedza. Iye Extremaduran munyori wenhoroondo enganonyorwa ane nzira yakakura kudaro izvo zvinenge zvarasika munguva uye kubudirira: Chiedza cheEast, Iyo Mozarabic, Musungwa, Musuo Wakakomba, Iyo Knight yeAlcántara, Alcazaba... Zvave zvichinakidza kukwanisa kuita iyi hurukuro ne. Mariri anotiudza nezve basa idzva iri uyezve anotiudza zvishoma nezvevanyori vaanofarira kana chiitiko chekutsikisa. Ndinonyatsokoshesa nguva yako uye mutsa vakazvipira.
JESU SÁNCHEZ ADALID - BVUNZO
LITERATURE CURRENT: Novel yako nyowani iri Zvombo zvechiedza. Chii chaungatiudza nezvake?
JESU SÁNCHEZ ADALID: Zvombo zvechiedza Ndicho mweya rwendo yakanangana nenguva inonakidza kwazvo munhoroondo, iyo kupera kwezana ramakore rechigumi uye kutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Inguva inonakidza sekusazivikanwa kwayo.
Zvese zvinotanga apo, kutenderedza gore 1000, Almanzor zvakare anotyisidzira kuchamhembe kweHiberian peninsula. Vamwe ngarava dzinoshamisa dzinosvika pamhenderekedzo yeTarragona uye vanosiya mutorwa aripo pachiteshi chidiki cheCubelles. Izvo zvakakosha zvevakomana vaviri zvinotitora isu kuburikidza nenharaunda dzakasiyana dzeCatalonia, apo iyo makwikwi ehondo anomhanya-mhanya izvo zvichaguma ne Córdoba.
Iyo pfungwa yakauya kubva ku kusangana nechiitiko chinoshamisa chenhoroondo, asi zvisingazivikanwe zvisingazivikanwe. Ndakawana iyo data ingangoita netsaona ... Pane nyaya dzinoita sedzakamirira iyo iripo nguva kuti inyorwe.
Izvo zvese zvakatanga ndichitsvaga yenyaya yapfuura, pakauya chidimbu cheruzivo chakakosha muzvinyorwa zveIslam zvandaisaziva zvachose kwandiri: lMaCatalan akapamba Córdoba mukutanga kwezana ramakore regumi nerimwe, apo chiuto chakange chakazara musimba. Izvi zvakaitika mushure mekufa kwaAlmanzor, uye sekutsiva kwakarongwa zvakanaka. Nekuti Almanzor pamberi, mugore ra985, akanga apamba uye akaparadza Barcelona zvakare, achitora kuCordoba hupfumi hwake hwese uye zviuru zvevatapwa.
Kuverenga kweCatalan hakuna kumbokanganwa izvo, uye havana kukanganwa chokwadi chekuti maFranks anga asina kuuya kuzovabatsira. Kubva ipapo zvichienda mberi, vakasarudza kuzvimiririra kubva kuhumambo hweFrank kuti vatange ivo vega rwendo, zvisinei nekutyisidzira kukuru kwakakonzerwa nevaMuslim. Chiitiko chekutsiva chakauya apo chihwande muhondo yevagari vemo. VaCatalan vakaunganidza uto guru ndokuburukira kuCórdoba, iro rakanga richiri iro guta rakapfuma uye rakapenya kupfuura mamwe ose kuMadokero.
Ndatsvaga vakatendeka vadzokororazve hupenyu mumizinda nenhare dzevarwi, hukama hwakasarudzika pakati pevanokudzwa nevafundisi, hupfumi hwemamongi, tsika dzezuva nezuva, rudo, hondo, kutya uye ushingi ... Nguva dzose munzvimbo dzinonakidza dzepasirose yakanaka nyika ine makobvu, asi zvakare yakaorera uye izere nemaguta akajeka: Barcelona , Gerona, Seo de Urgell, Vic, Solsona, Besalú, Berga, Manresa, Tortosa, Lérida…; uye yemamongi makuru anowedzera simba ravo: Santa María de Ripoll, San Cugat, San Juan de las Abadesas, San Pedro de Rodas, San Martín de Canigó… Nechekare cheCaliphate Cordoba sechinhu chiri kumashure.
Pakati peizvi zvese, a mukadzi wechidiki zvichakurukurwa zve sununguka kubva muhusungwa hwenyika yako yakavharwa yaunoziva Uye zvemagariro.
Mumwe munhu akakosha de Zvombo zvechiedza es olivia, mwanakomana wekuverenga kwaCerdanya naBesalú, uyo muna 1002 anoramba nhaka yake ku kuva mumongi. Pakati pekuvhiringidzika nemhirizhonga, murume anobuda ane pfungwa nenjere zvinounza chiedza, uye achawana pfuma yechokwadi, iri yemweya muchimiro ...
JSA: Bhuku rekutanga randinorangarira ndichiverenga rakanzi Ndinobva kuExtremadura. Raive bhuku yevana iyo yakatsanangura zvinhu zveExtremadura uye yakataura nyaya dzevanyori veExtremadura kubva kare.
Ini ndakanyora nyaya yekutanga pandaive nemakore gumi. Yakanga iri nyaya nezve muridzi wepiano.
JSA: Ndakavhunduka zvikuru Michael Strogoff naJules Verne. Zvakandifambisa, zvakandichengetedza, uye zvakaita kuti ndifambe… handisati ndambokwanisa kukanganwa nyaya iyoyo.
JSA: Uyu hausi mubvunzo uri nyore kupindura kwandiri. Asi ini ndinoedza ... Miguel Delibes, semunyori wechiSpanish akararama panguva imwe cheteyo. cheep Baroja, Benito Perez Galdos, Lewis Landman… Vatorwa: Victor Hugo, Fyodor Dostoevsky, Shumba Tolstoy, Anton Chekhov, Vladimir Nabokov (ndinobva kuvanyori veRussia ...). Asiwo Thomas murume, Virginia Wool, Orhan donje, Nagib Mafoud, Najib Mahfoud… Kune akawanda kwazvo!
JSA: Iyo viscount hafu naItalo Calvino kana tiine ruzivo.
JSA: Ndinonyora nepeni nhema yeingi pane chena folio. Ipapo inoenda kune komputa ...
Ndakaverenga nepahwindo kubva kumba kwangu kuAlange. Pamberi penzvimbo yakanaka.
AL: Uye yako yaunofarira nzvimbo uye nguva yekuzviita??
JSA: La manheru padhuze nepahwindo.
JSA: Ini handiwanzo verenga nhoroondo dzezvakaitika, nekuti ini ndinoshandisa yakawanda nguva kuverenga nhoroondo, zvinyorwa, zvinyorwa, zvinyorwa ... Kune vamwe vese, ini ndakaverenga zvishoma zvese: uzivimabhuku ekufambisa zvekare, nhoroondo uye kunyange mabhuku ekubika uye gastronomy.
JSA: Ndakaverenga bhuku ra Eugenio Zolli, yakanzi Kusati kwaedza. Uye ini ndiri kunyora iyo script ye documentary yenyaya yezvakaitika.
JSA: ndofunga kune mikana yakawanda. Dhijitari rutsigiro inguva yakanaka yekutanga. Usamboora mwoyo. Nhau dzakanaka ndedzekuti, kunyangwe hosha iyi, musika wekutsikisa wakura uye unoverengwa zvakanyanya kupfuura gore rapfuura.
Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo iri kukuomera here kana iwe uchave unokwanisa kugara nechimwe chinhu chakanaka?
JSA: Inguva inotyisa. Asi, kwandiri, Ini ndakakwanisa kuratidza uye kushanda nehukuru hwakadzikama uye kuisa pfungwa.
Nguva yatiri kurarama mairi inosuruvarisa, haina tariro ... Tiri kutarisana nemamiriro matsva uye atisingatarisiri. Isu tese, takakurira mutsika yakawedzera kuyedza kudzima marwadzo nerufu, isu takatarisana nekukasira uye nekushaya rubatsiro. Iyo mibvunzo inouya kwatiri zvakananga uye nechisimba kuburikidza nenjodzi iripedyo uye kutya kunotikwazisa. Ndiko kutya kurwara, kubiwa mukamuri yevanotarisirwa zvakanyanya… Ndiko, pakupedzisira, kutya kufa. Denda ratidzosera kurufu, chiitiko chinotyisa kwazvo uye chisingakundiki kune vazhinji.
Ndasangana nemamiriro ezvinhu anorwadza. Asi zvakare iyi nguva isingawanzo, semamiriro ese akashata, ine dzidziso dzayo uye nenguva dzayo dzekunyaradza uye nechiedza. Iko hakuna kukwana nzvimbo pano yekuudza makesi nedudziro inodiwa. Zvakwana kutaura izvozvo Ndiri kuwana zvinhu zvinonakidza pamusoro pevanhuIzvo zvinoshamisa kuti isu tiri! Musanganiswa usinganzwisisike wemimvuri nemwenje ... Kune vanhu vanouya kwandiri, kazhinji mukushamisika, pakuwana mukati, nekuda kwekusangana nehunhu hwakawanda hwevanhu hwakaramba hwakanyarara uye izvo zvino zvabuda ... Kudzoreredza hushamwari, Dzakaparadzaniswa mhuri dzinosangana zvakare, kusatarisirwa mafoni, kuregererwa, kuyanana, magamba zviito, kusafarira, rudo rwechokwadi ... Ndine chokwadi chekuti kubva zvino hapana chinenge chakafanana!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Jesús Sánchez Adalid. Kubvunzana nemunyori weZvombo zveChiedza
Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha